एक्वैरियम को लागी सबै भन्दा राम्रो AquaClear फिल्टर, जो एक छनौट गर्न को लागी? | माछाहरुको
AquaClear फिल्टर केहि समय को लागी एक्वैरियम संसार मा भएको जो कोही जस्तै आवाज हुनेछ, किनकि उनीहरु एक्वैरियम फिल्टरिंग मा सबैभन्दा प्रसिद्ध र सबैभन्दा अनुभवी ब्रान्डहरु मध्ये एक हुन्। तिनीहरुको झोला फिल्टर, पनि झरना को रूप मा जानिन्छ, विशेष गरी मूल्यवान र सम्पूर्ण समुदाय द्वारा प्रयोग गरीन्छ।
यस लेखमा हामी गहिराई मा AquaClear फिल्टर को बारे मा कुरा गर्नेछौं, हामी उनीहरुको मोडेल को केहि सिफारिश गर्दछौं, हामी तिनीहरुको विनिर्देशहरु देख्नेछौं र हामी पनी उनीहरुलाई कसरी सफा गर्न सिकाउनेछौं। हामी यो सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ यो सम्बन्धित लेख पढ्नुहोस् एक्वैरियम को लागी ओस्मोसिस फिल्टर, सबै कुरा तपाइँ जान्न आवश्यक छ.
1 सर्वश्रेष्ठ AquaClear फिल्टर
1.1 एक्वाक्लीयर २०
1.2 एक्वाक्लीयर २०
1.3 एक्वाक्लीयर २०
1.4 एक्वाक्लीयर २०
2 कसरी एक AquaClear फिल्टर काम गर्दछ
3 AquaClear फिल्टर प्रतिस्थापन भागहरु को प्रकार
4 AquaClear एक्वैरियम को लागी एक राम्रो फिल्टर ब्रान्ड हो?
5 AquaClear फिल्टर शोर छन्?
6 कसरी एक AquaClear फिल्टर सफा गर्ने
7 कति पटक तपाइँ फिल्टर लोड परिवर्तन गर्न को लागी छ?
सर्वश्रेष्ठ AquaClear फिल्टर
एक्वाक्लियर प्रणाली ...
एक्वाक्लियर A595 ...
AquaClear फिल्टरि Char शुल्क ...
AquaClear A610 - प्रणाली ...
अब हामी यो हेर्नेछौं यो ब्रान्ड को सबै भन्दा राम्रो फिल्टर। जे होस् उनीहरु सबै एउटै विनिर्देश साझा र, पक्कै, गुणस्तर, फरक मुख्य रूप मा अधिकतम लीटर मा पाउन सकिन्छ कि एक्वैरियम जहाँ हामी फिल्टर र प्रति घन्टा प्रशोधित लिटर को संख्या स्थापित गर्न जाँदैछौं हुन सक्छ।
यो फिल्टर सबै सामान्य AquaClear गुणस्तर सुविधाहरु, साथ साथै एक धेरै मौन प्रणाली, र पक्कै यसको तीन फिल्टरिंग मोड, एक्वैरियम को लागी 76 लीटर भन्दा बढि छैन। यो एक प्रवाह दर छ कि प्रति घण्टा 300 लीटर भन्दा बढि प्रक्रिया छ। यो इकट्ठा गर्न को लागी धेरै सजिलो छ र मुश्किलले कुनै ठाउँ लिन्छ।
यस मामला मा यो बारे मा छ एक फिल्टर कि ११४ लीटर सम्म एक्वैरियम मा यसको स्थापना को अनुमति दिन्छ, र त्यो प्रति घन्टा 500 लीटर भन्दा बढि प्रशोधन गर्न सक्छ। सबै AquaClear फिल्टर जस्तै, यो मौन छ र तीन फरक फिल्टरेशन (मेकानिकल, रासायनिक र जैविक) सामेल छन्। AquaClear संग तपाइँको एक्वैरियम मा पानी मात्र क्रिस्टल स्पष्ट हुनेछ।
AquaClear फिल्टर को यो मोडेल हो अरु को लागी समान, तर १ 190 ० लीटर सम्म एक्वैरियम मा प्रयोग को लागी सिफारिश गरीयो। यो प्रति घण्टा 700 लीटर को बारे मा प्रशोधन गर्न सक्छ। अन्य मोडेलहरु जस्तै, AquaClear 50 एक प्रवाह नियन्त्रण जसको साथ तपाइँ पानी को प्रवाह लाई कम गर्न सक्नुहुन्छ।
र हामी अन्तमा यो ब्रान्ड को फिल्टर को सबै भन्दा ठूलो मोडेल, जो न त अधिक र न ही 265 लीटर सम्म एक्वैरियम मा भन्दा कम प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो फिल्टर पनि एक हजार लिटर एक घण्टा को एक whopping प्रशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। यो अरु को तुलना मा धेरै ठूलो छ, जो अविश्वसनीय शक्ति सुनिश्चित गर्दछ (यति धेरै कि केहि टिप्पणीहरु भन्छन् कि उनीहरुलाई यो न्यूनतम समायोजित गरीएको छ)।
कसरी एक AquaClear फिल्टर काम गर्दछ
AquaClear फिल्टर के हो ब्याकप्याक फिल्टर को रूप मा जानिन्छ। फिल्टर को यी प्रकार विशेष गरी साना र मध्यम एक्वैरियम को लागी उपयुक्त छन्। उनीहरु ट्यांक बाहिर "हुक्ड" छन्, माथिल्लो किनारा मध्ये एक (यसैले उनको नाम), त्यसैले उनीहरु एक्वैरियम भित्र ठाउँ लिदैनन् र, यसबाहेक, उनीहरु एक्वैरियम को लागी डिजाइन गरीएको बाहिरी फिल्टर को रूप मा भारी छैनन्। यसको अतिरिक्त, उनीहरु झरना को एक प्रकार मा पानी छोड्छन्, जसले यसको अक्सिजन सुधार गर्दछ।
AquaClear फिल्टर धेरै फिल्टर जस्तै काम गर्दछ यस प्रकारको:
पहिलो, पानी एक प्लास्टिक ट्यूब को माध्यम बाट प्रवेश गर्दछ र फिल्टर मा प्रवेश गर्दछ।
त्यसपछि उपकरण तल बाट माथी फिल्टरिंग प्रदर्शन गर्दछ र पानी तीन फरक फिल्टर (मेकानिकल, रासायनिक र जैविक, जसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्नेछौं) को माध्यम बाट बित्छ।
एक पटक फिल्टरिंग पूरा भएपछि, पानी फिर्ता एक्वैरियम मा आउँछ, यो समय सफा र अशुद्धता बाट मुक्त।
यस उत्कृष्ट ब्रान्ड को फिल्टर को बारे मा रोचक कुरा यो हो कि उनीहरु मा शामिल छ, तीन फरक फिल्टर को अतिरिक्त, एक प्रवाह नियन्त्रण जसको साथ तपाइँ flow% सम्म पानी को प्रवाह लाई कम गर्न सक्नुहुन्छ (उदाहरण को लागी, जब तपाइँको माछा खुवाउने)। फिल्टर मोटर कुनै पनी समयमा काम गर्न बन्द गर्दैन, र, यदि प्रवाह कम हुन्छ, फिल्टर गरिएको पानी को गुणस्तर या त घट्दैन।
AquaClear फिल्टर प्रतिस्थापन भागहरु को प्रकार
हामीले पहिले भनेजस्तै, AquaClear फिल्टरहरु सबै अशुद्धता हटाउन को लागी तीन फिल्टरिंग प्रणाली छ पानी को र यसलाई सकेसम्म सफा छोड्नुहोस्।
एक्वाक्लीयर चार्जिंग कार्बन ...
यो हो पहिलो फिल्टरेशन कि किक जब फिल्टर काम गर्दछ, यस प्रकार सबैभन्दा ठूलो अशुद्धिहरु लाई फँसाउने (जस्तै, उदाहरण को लागी, पप, खाना, निलम्बित बालुवा को अवशेष ...)। यांत्रिक निस्पंदन को लागी धन्यवाद, पानी मात्र सफा रहन्छ, तर यो पनि सबै भन्दा राम्रो तरीका मा जैविक निस्पंदन, तीन को सबैभन्दा जटिल र नाजुक फिल्टर पुग्छ। AquaClear को मामला मा, यो फिल्टर फोम संग बनाईएको छ, सबै भन्दा राम्रो तरीका यी अवशेषहरु लाई कब्जा गर्न को लागी।
केवल फोम माथि कि मेकानिकल निस्पंदन बाहिर हामी बाहिर पाउँछौं रासायनिक निस्पंदन, सक्रिय कार्बन मिलेर बनेको छ। यो निस्पंदन प्रणाली के गर्छ पानी मा भंग गरीएको धेरै साना कणहरु लाई हटाउँछ कि मेकानिकल निस्पंदन जाल गर्न सक्षम भएको छैन। उदाहरण को लागी, यो धेरै उपयोगी छ जब तपाइँ आफ्नो माछा medicating पछि पानी सफा गर्न चाहानुहुन्छ, यो कुनै पनी बाँकी औषधि हटाउनेछ। यो दुर्गन्ध हटाउन पनि काम गर्दछ। यो फिल्टर ताजा पानी एक्वैरियम मा प्रयोग को लागी सिफारिश गरीएको छैन।
AquaClear चार्ज ...
अन्तमा हामी सबैभन्दा नाजुक निस्पंदन, जैविक एक आउँछ। र ब्याक्टेरिया कि बायोमैक्स मा बस्ने, सिरेमिक ट्यूबहरु कि AquaClear यस फिल्टर मा प्रयोग गर्दछ, यो निस्पंदन को लागी जिम्मेवार छन्। ब्याक्टेरियाहरु जो canutillos मा राखिएका छन् कणहरु लाई उनीहरु लाई आउन को लागी जिम्मेवार छन् (उदाहरण को लागी, बिरुवाहरु विघटन बाट) धेरै कम विषाक्त तत्वहरुमा क्रम मा राम्रो तरीकाले तपाइँको एक्वैरियम र तपाइँको माछा खुसी राख्न को लागी। यसको अतिरिक्त, जैविक निस्पंदन कि AquaClear तपाइँ लाई लाभ छ कि यो दुबै ताजा र नुन पानी एक्वैरियम मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
AquaClear एक्वैरियम को लागी एक राम्रो फिल्टर ब्रान्ड हो?
AquaClear निस्सन्देह एक हो दुबै शुरुआती र एक्वैरियम को दुनिया मा विशेषज्ञहरु को लागी धेरै राम्रो ब्रान्ड। न केवल किनभने उनीहरु एक इतिहास को एक धेरै संग एक ब्रान्ड हो र यो धेरै ठाउँहरु मा उपलब्ध छ (या त अनलाइन वा जनावरहरु को भौतिक पसलहरु मा, उदाहरण को लागी) तर किनकि इन्टरनेट मा फैलिने राय सबै मा धेरै बिन्दुहरु छन् साधारण: कि उनीहरु यो एक क्लासिक ब्रान्ड हो, अनुभव निर्माण फिल्टर को एक धेरै संग, जो उच्चतम गुणवत्ता को हो र यसको उत्पादनहरु मा धेरै हेरचाह राख्छ।
AquaClear फिल्टर शोर छन्?
AquaClear फिल्टरहरु धेरै शान्त हुन को लागी प्रसिद्ध छन्। जे होस्, यो उनीहरु को लागी प्रयोग को पहिलो दिनहरु को लागी घन्टी को लागी सामान्य छ, किनकि उनीहरु लाई अझै केहि फिलिम लिनु पर्छ।
एक चाल छ कि यो यति धेरै ध्वनि छैन को लागी फिल्टर एक्वैरियम को गिलास मा आराम छैन, को लागी प्रयास गर्न को लागी हो। धेरै पटक यो कम्पन र आवाज को कारण हो कि यो सम्पर्क हो, जुन केहि कष्टप्रद बन्न सक्छ। यो गर्न को लागी, गिलास बाट फिल्टर अलग गर्नुहोस्, उदाहरण को लागी, रबर को औंलाहरु राखेर। फिल्टर को स्थिति पनि महत्त्वपूर्ण छ ताकि यो यति धेरै शोर गर्दैन, यो बिल्कुल सीधा हुनु पर्छ।
अन्तमा, यदि यो धेरै शोर बनाउन जारी छ, यो सिफारिश गरीन्छ कि तपाइँ जाँच गर्नुहोस् कि यदि यो छ केहि ठोस अवशेष (जस्तै धैर्य वा केहि मलबा) टर्बाइन र मोटर शाफ्ट को बीचमा रह्यो.
कसरी एक AquaClear फिल्टर सफा गर्ने
AquaClear फिल्टर, सबै फिल्टर जस्तै, समय समयमा सफा गर्नुपर्छ। यद्यपि तपाइँ कति पटक यो गर्न को लागी यो प्रत्येक एक्वैरियम र यसको क्षमता मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ सामान्यतया थाहा पाउनुहुनेछ कि यो सफाई को लागी समय हो जब आउटलेट प्रवाह घट्न थाल्छ (सामान्यतया हरेक दुई हप्ता) भग्नावशेष को कारण जम्मा भएको छ।
सबै भन्दा पहिले तपाईले गर्नु पर्छ फिल्टर अनप्लग गर्नुहोस् ताकि एक अप्रत्याशित चिंगारी वा नराम्रो प्राप्त गर्न को लागी।
पछि फिल्टर घटक अलग गर्नुहोस् (कार्बन मोटर, सिरेमिक ट्यूब र फिल्टर स्पंज)। वास्तव मा, AquaClear पहिले नै एक आरामदायक टोकरी जसको साथ सबै सफाई पाँच मिनेट भन्दा बढी लिनु हुँदैन समावेश गर्दछ।
केही राख्नुहोस् एक बेसिन मा एक्वैरियम पानी.
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ एक्वैरियम को पानी को उपयोग गर्नुहोस् स्पंज र अन्य घटक सफा गर्नुहोस् फिल्टर। अन्यथा, उदाहरण को लागी यदि तपाइँ ट्याप पानी को उपयोग गर्नुहुन्छ, यी दूषित हुन सक्छन् र फिल्टर काम गर्न बन्द हुनेछ।
यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ यसलाई फेरि गर्नुहुन्छ सबै थोक जहाँ यो सही थियोअन्यथा, ढक्कन ठीकसँग बन्द हुनेछैन, त्यसैले फिल्टर ठीकसँग काम गर्न बन्द हुनेछ।
अन्ततः, फिल्टर मा कहिल्यै प्लग र यो सुक्खा चलाउनुहोस्अन्यथा त्यहाँ एक खतरा छ कि यो overheat र जलाउने छ।
कति पटक तपाइँ फिल्टर लोड परिवर्तन गर्न को लागी छ?
सामान्यतया फिल्टर लोड समय समयमा समय परिवर्तन गर्नै पर्छ ताकि फिल्टर सही ढंगले आफ्नो काम गर्न को लागी जारी रहन्छ, अन्यथा जम्मा भग्नावशेष को मात्रा फिल्टर र पानी को प्रवाह को गुणस्तर दुबै लाई असर गर्न सक्छ। जे होस्, सधैं को रूप मा, यो एक्वैरियम को क्षमता मा धेरै निर्भर गर्दछ, सबैभन्दा सामान्य हो:
परिवर्तन गर्नुहोस् esponja हरेक दुई बर्ष वा यति, वा जब यो चिपचिपा र ब्रेक हुन्छ।
परिवर्तन गर्नुहोस् फिल्ट्रो डे कार्बन सक्रिय एक महिना वा एक पटक।
को सिरेमिक grommets सामान्य मा उनीहरु लाई परिवर्तन गर्न को लागी छैन। जति धेरै ब्याक्टेरिया कोलोनी फस्टाउँछ, राम्रो उनीहरु आफ्नो फिल्टरिंग काम गर्दछन्!
AquaClear फिल्टर तपाइँको एक्वैरियम फिल्टर को लागी एक गुणस्तर समाधान हो दुबै यस दुनिया मा newbies को लागी र विशेषज्ञहरु को लागी, साथ साथै ती जो मामूली आयाम को एक एक्वैरियम वा ती सागर संगै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् को लागी। हामीलाई भन्नुहोस्, तपाइँ आफ्नो एक्वैरियम मा कुन फिल्टर को उपयोग गर्नुहुन्छ? के तपाइँ कुनै सिफारिश गर्नुहुन्छ? तपाइँसँग यो ब्रान्डको साथ कस्तो अनुभव छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: माछाको » Accesorios » AquaClear फिल्टर